Ny QIT600 F2 dia ny QOMO farany indrindra sy lehibe indrindra amin'ny fanaraha-maso interactive ecran. Ampiasao ity podium interactive desktop vaovao sy nohatsaraina ity mba hifehezana ny lahateninao na ny famelabelaranao nefa tsy mitodika any amin'ny mpihaino anao. Eo amin'ny biraonao dia tablette matanjaka misy sera lehibe sy mamirapiratra ary tena mahazaka.
Fanamarihana: Manohana ny marika Qomo izahay ho an'ny demo raha ao amin'ny famokarana faobe dia afaka manaiky OEM / ODM
Hery bebe kokoa amin'ny peninao
Manaova fanamarihana momba ny zavatra rehetra miaraka amin'ny sora-tanana simulate haingana sy malefaka. Makà an-tsoratra, sketch, ary mamorona toy ny ataonao ao amin'ny kahie tianao indrindra.
Azonao atao ny manoratra amin'ny penina misy karazana tsipika samihafa ary tsindrio ny penina ho famafana mba hamafa ny hevi-diso.
Ny fampisehoana penina famoronana Qomo dia hanampy anao hankafy ny traikefa miasa mivantana amin'ny efijery miaraka amin'ny penina saro-pady.
Natao ho mora sy mahazo aina
Ahitsio ny QIT600 F2 na aiza na aiza eo anelanelan'ny 12° sy 130°—izay mety ho tsara indrindra. Ary tsy mila miahiahy momba ny fitsabahana ianao rehefa mametraka ny tananao eo amin'ny efijery rehefa manoratra na manao sary.
Mifandraisa hatrany amin'ny mpihaino anao
Ampifandraiso amin'ny PC amin'ny alàlan'ny fampidirana HDMI, ary mivoaka amin'ny projector na efijery lehibe. Azonao atao ny mifehy ny zavatra rehetra hitan'ny mpihaino anao amin'ny fitaovana tokana, tsy mila mijery ao ambadikao na miafina ao ambadiky ny efijery solosaina.
Feno laminated 21.5 mirefy (Haben'ny efijery mahomby: 478.64(H) X 270.11(V)) IPS Pen Display:
Miaraka amin'ny teknolojia vita amin'ny lamosina feno farany ary misy tontonana fitaratra manohitra ny glare, mampihena tsara ny fahatsapana manjelanjelatra ary saika tsy misy offset, arovy ny masonao rehefa mankafy sary.
Ny zoro fijerena 178° ary ny fampisehoana miloko 16.7M dia manampy anao handoko tsara ny pitsopitsony rehetra ho an'ny asakantonao.
1920 * 1080 famaha ny fahitana mazava sy ny ambaratongan'ny loko tena sy mazava dia manome anao tontolo hita maso
Mahery sy mifanentana
Samy mifanaraka amin'ny rafitra windows sy android
mifanaraka tsara amin'ny rindrambaiko fanaovana sary PS, AI, AE sns
Pejy fanoratana takelaka nomerika momba ny fonosana
Standard fonosana fomba: 2 pcs/carton
lanja lehibe: 15,6 kg
Fonosana habeny: 600*345*510mm
Manaraka: Takelaka data QWB300-Z
teo aloha: Qomo Interactive Flat Panel miaraka amin'ny 4K avo lenta
Takelaka data QIT600F2
QIT600F2 takelaka fanoratana antsipirihany haingana
QIT600 F2 Bokikely takelaka fanoratana